iPhone X အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသော Telegram X အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone X အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသော Telegram X
Telegram သည်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၌နေရာတစ်ခုရလာသည်။ သို့သော်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းတစ်နေ့၊ အနည်းဆုံးအနာဂတ်ကာလတွင်၎င်းသည် WhatsApp မှပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည် developer များ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအားကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အလွန်ကြီးသည်ကိုငြင်း။ မရပါiOS ၏အသစ်အဆန်းများကိုအလျင်အမြန်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ယနေ့တွင်၎င်းတို့အား install လုပ်ထားသော“ ပုံမှန်” ဗားရှင်းနှင့်အတူယှဉ် တွဲ၍“ Telegram X” ဟုခေါ်သည့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အဲဒါက themes အသစ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအပြင် Swift language ကိုအသုံးပြုပြီး scratch မှရေးသားထားသော application သစ်အက်ပဲလ်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအသစ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၎င်းသည်အရည်များများစားစားနှင့်ဘက်ထရီများစွာသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်သင်စက်ဟောင်းတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပါကအလွန်အရေးကြီးသည်။
လျှောက်လွှာအသစ်ကိုဖွင့်သည်နှင့်ချက်ချင်းပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။ ကာတွန်းများကိုလှိမ့်ချခြင်းသည်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးတင်ပို့ချိန်သည်တိုတောင်းသည်တရားဝင် Telegram ဗားရှင်း၌မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သော်လည်းဤ Telegram X အသစ်ကိုအသုံးပြုသောအခါ ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ developer များပြောသည့်အတိုင်းဘက်ထရီတိုးတက်မှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် Telegram သည်ကျွန်ုပ်အများဆုံးအသုံးပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ဘက္ထရီပိုမိုသုံးစွဲသောကြောင့်၎င်းသည်ပြည့်စုံပါကသတင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှောင်မိုက်သောသို့မဟုတ်အလင်းရောင်နောက်ခံရှိသည့်အကြောင်းအရာများစွာမှရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တွင် iPhone X ရှိပါကအမှောင်ထုထဲမှတစ်ခုခုကိုသင်အံ့သြစွာပြုလုပ်လိမ့်မည် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လျှောက်လွှာရှိခြင်းအားဖြင့်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချကူညီခြင်းအပြင်။ နောက်ခံနှင့်စာလုံးအရွယ်အစားကိုသင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဤအက်ပလီကေးရှင်းတွင် Apple Watch အက်ပလီကေးရှင်းအချို့မပါရှိသော်လည်း၎င်းသည်မကြာမီသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါဟာလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် တူညီတဲ့ Telegram developer များကဖန်တီးခဲ့သည်၎င်းသည်တရား ၀ င်လျှောက်လွှာမဟုတ်သောကြောင့်သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ပထမမိနစ်နှင့်ကွာခြားချက်ကိုသင်သတိပြုမိသောကြောင့်သင်စမ်းကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iPhone X အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသော Telegram X
ဒါဟာသုံးနှစ်ကြာတည်ရှိပြီးအသစ်မွမ်းမံထားသော APP တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။
iOS အတွက်ပြန်လည်ရေးပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အိုင်ကွန်တွင် 3D Touch မပါရှိသလော။
ကျေးဇူးပြု၍ Telegram ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဘာမှမပါ ၀ င်ဘဲ APP နှစ်ခုစလုံး၏တီထွင်သူသည်မတူပါက (တရားဝင်သည်အမည်နှင့်ဆင်တူသော်လည်းဟုတ်ကဲ့) သည်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းသင်မည်သို့သိကြောင်းပြောပြပါ။
ဟယ်လို! လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်က Telegram HD ရှိခဲ့သည့်အတွက်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အိုင်ပက်အတွက်တရားဝင်ကြေးနန်းအက်ပလီကေးရှင်းအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသော်လည်းအိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်အဆုံးသတ်ခံလိုက်ရသည်။
ငါလူးဝစ်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကိုမင်းဖတ်နိူင်ပေမဲ့၊ ဒါဟာ ၁၀၀% တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါကိုမကြေငြာသေးပါ ပထမတစ်ခုပါ
100% ။ ငါ Telegram က Telegram Messenger LLP ရဲ့အကောင့်အောက်မှာတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
iPhone X ထွက်လာကတည်းကမူလကပြproblemsနာတွေပေးပြီးကတည်းကငါသုံးခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းကြီးကျယ်တယ်။ တစ်ခုတည်းသောမကောင်းတဲ့အချက်ကသူတို့ဘောလုံးကိုသွားတာပဲ၊ ဥပမာ - အက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းလုပ်တဲ့အခါသတင်းမသက်ဆိုင်ဘူး၊ ချက်ခြင်းနောက်ခံရှိသူများသည်စာကြည့်တိုက်မှနောက်ခံကိုရွေး။ မရပါ၊ အပလီကေးရှင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်လိုသည်၊ အစမှာအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘဲ၊ သင့်အပြီးတွင်သို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်တို့ထိရန်နှင့်ဝစ်ဂျက်များပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်မူလဘာသာစကားကိုယူပါ
ဤ app ကို Telegram မှတိုက်ရိုက်တီထွင်သည်။ ၎င်း၏ပိုမိုကောင်းမွန်မှုကြောင့် iOS တွင်ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးသော်လည်း App Store တွင်ရနိုင်သည်။ အမှားအယွင်းများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေရှင်းပေးရန် (ဤသည်မှာယခုအချိန်အထိအလင်းကိုမမြင်တွေ့ရသေးသော Swift တွင်ရေးထားသည့် app တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး version တွင်ပင်များစွာသော) iTunes Connect သည်ခရစ်စမတ်အတွက်ပိတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်လိုအပ်သည်မှာပရိုဂရမ်သည်တယ်လီဂရမ် (တရားဝင်) မှဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားရှိပါက developer သည် iMessage ၏တရားဝင်ကြေးနန်းစတစ်ကာများ (ငွေစုဆောင်းရန်နှင့် Telegram ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်း) နှင့်အတူတူပင်တီထွင်သူနှင့်တူကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည် macOS အက်ပ်များ။ Android ပေါ်မှာ Google Play ပါ။
၎င်းသည် "Telegram Messenger LLP" (ကျွန်ုပ်ဓါတ်ပုံများကိုထည့်။ မရပါ၊ သို့သော် "telegram messenger llp" ကို Safari တွင်သာရှာဖွေ။ macOS အတွက် Telegram app ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
အမှန်စင်စစ်၎င်းသည် "ဂန္ထဝင်" တယ်လီဂရမ်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်တူညီသည်။ ဤသည် developer များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်ထက်ပိုပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများစွာအသုံးပြုသော "နည်းစနစ်" ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးမရှိသော "Facebook, Inc"
သင် ထပ်မံ၍ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကသင်သည် Telegram X ရှိအက်ပလီကေးရှင်း၏အပ်ဒိတ်သမိုင်းကိုသွားပြီး၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကနောက်ဆုံးသတင်းများမည်သို့ရှိသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ယခင်က iPad အတွက်တရားဝင် Telegram application ဖြစ်ခဲ့သော်လည်းယနေ့နှင့် iPhone နှင့် iPad အတွက်တစ်ခုတည်းသော Telegram application တစ်ခုဖြစ်သည်။
iOS အတွက်အမှန်တကယ်မှောင်မိုက်သည့်အခင်းအကျင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့ !!!
Jesus Manuel Blázquez ဟုသူကပြောသည်
group chats တွင်သင်ကိုယ်တိုင်သတိပေးသံကိုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နားထောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ 3D Touch တွင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာရှိသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်လည်းတိုင်တန်းမည်။
Jesús Manuel Blázquezအားပြန်ပြောပါ
အက်ပ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကွဲပြားသောမိုဘိုင်းနံပါတ်များကို သုံး၍ တယ်လီဂရမ်နှစ်ခု (ဥပမာ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလုပ် +) တစ်ခုတည်းရှိသလား။
မင်းမှာသင်လိုချင်တဲ့ Telegram အကောင့်တွေအားလုံးရှိနေနိုင်သလောက်အဲဒါကိုဖန်တီးဖို့နောက်ကွယ်မှာရှိနေပါတယ်။ သင်လိုချင်သလောက်ဆိုဒ်များစွာသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Telegram, Telegram X, Telegram ဝဘ်နှင့်တတိယပါတီအက်ပ်များအားလုံးကို သုံး၍ အကောင့်တစ်ခုစီတွင်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အကယ်လို့ iPhone X အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် FaceID မရှိဘူးလား ???
ကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးသော Telegram ဗားရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သော FaceID ကိုကျွန်တော်မသုံးနိုင်ပါ။
သူတို့က Apple ကိုဘက်ထရီအဟောင်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေနှေးကွေးမှုအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်